Jimaata Borii Hiriirri Guddaan Guutummaa Oromiyaa Keessatti Nii Adeemsifama! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJimaata Borii Hiriirri Guddaan Guutummaa Oromiyaa Keessatti Nii Adeemsifama!
Jimaata Borii Hiriirri Guddaan Guutummaa Oromiyaa Keessatti Nii Adeemsifama!
Dambi Doolloon kalessa mootummaa EPRDF /TPLF Saamooraan ajajamu Agaaziin ilmi ajjeeffame haadhaan reenfa irra teesiisan. Hardha affeeraa Lammaa Magarsaa fi eyyama MM Abiyyi Ahmed ummatni ajjeeffamaa, gidirfamaa fi salphifamaa jira.
Toftaanis tokkuma. Waraanis tokkuma. Sirnichiis sirnuma EPRDF. Kan ajajeetu adda. Oromoo fi Oromoo ofiin jedha malee. Dhihuma kana fakkeesuuf “gooftaan keenya ummata Oromooti ” jechaa turan. Hanga aangoo totolfatan kana jedhanii amma ifaadha. Qawween ummata bulchuun akka hin dandeenye ofumaaf dubbatanii ofumaafuu Qawween gooftaa isaanii ajjeesuu fi shororkeesuuti seenan. Namni gooftaa isaa tajaajilu eega aangoorra bahee ji’a sadi osoo hin guutiin ummata isaa kan diinaan madaawwe irratti madaa hin dabalu. Ajjeechaa ajjeechaan hin araarsu. Ajjeechaa fi humna waraanatti dhimma bahuun faashistoota ganna 27f ilmaan Oromoo akka Bosonuutti ajjeessaa bahaniifu milkoomina hin argisiisne jarra keenya bobbaa Wallaggatti itti jirtan tana irraa dhaabadhaa. Waan isiin gochaa jirtan tuni gochaa kana duraa irraa addaa miti kan dhangalaasaa fi salphisaa jirtan kun Oromoodha irraa of qabaa.
Daangaa Somaalee irratti dhiigni saba Oromoo dhangala’aa turee fi itti jiru kun homaa isiinitti dhagahamuu dhabeeti liyyuu poolisii fi agaazii Oromoo irratti bobbaasuun tun mee maal jedhamtii? Waan Gobannummaa silaahuu ofirraa ilaalaa hin jirtanii, ammoo Oromoon isiin ajaa’iba jira. Qaanauus qabduu ture. Kan kana duraatiif dhiffamma gaafatuu jennee osoo herreggaa jirruu yakka biroo itti dabaluuf jarjartan. Mee maal argatuufii?
Qeerroo fi Barabartan Abdi Ilee akka seeratti dhihaatu dhibbaa irra godhuuf Dire Dhwaatti marihatanii jiru.
ቄሮና በርበርታ አብዲ ኢሌ ከስልጣን እንድነሳና ሆን ብለው በድሬደዋ ሁለቱን ብሄር ለማጋጨት የሚጠነሰሱት ሴራዎች አብረው ለማክሸፍ ስምምነት ላይ ደርሰዋል.
SAGALEE QEERROO:ADOOLESSA 19 2018
ONN: ODUU Ammee (BREAKING News): Adoolessa 19 /2018: Bulchiinsa Magaalaa DIRREE DAAWAA ganda magaalaa BORAN, araddaa Booran jedhamu keessattii ilmaan Oromoo kan Artistiin Oromoo Maashoo Abduramaan jedhamtu keessatti argamtu dabalatee namootni 35 bakki itti mana ijaarraatn kun kan Oromoo miti seeraan ala asitti ijaarrattan bakki kun kan Somaaleeti jedhamuun bulchaan magaalaa Booranfi bulchaan Magaalaa Dirree Dawaa humna poolisii addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo fixaa jiran sana itti gadhiisuun manni jiraattoota ilmaan Oromoo 35 olii abiddaan barbadessuun isa kan irratti deeguun yeroo amma jiraattootni ilmaan Oromoo qe’ee isaanii irraa haala kanaan buqqa’anii mana jireenyaan ala ta’anii haala ulfaataa keessatti kan argaman ta’uu jiraattootni ONNtti gabaasan.
Gochaa dhala namaaf hinmallee uummata Oromoo irratti waraanni Liyyuu Ayilii Sumaalee jedhamuun waamamu geessisaa jiru, yakkoota mana jireenyaa uummata nagaarratti gubuu, ajjeechaa suukanneessaan dhabama gochuuf yakka daguuggaa shanyii uummata Oromoo irra gahu mormuuf hiriirichi Jimaata miilanaa Adooleessa 20,2018 qindaa’aa jiraachuutu himame.
Hiriirri kun tarkaanfii Dr. Abiyyi Liyyuu Ayilii irraatti fudhachuuf ibsa baasan gaarii ta’uuf ta’uus dubbatanii jabinaan akka irratti hojjetanif qaamota yakka kana raawwataa jiran akka seeratti dhiyeessaniif Waraana uummata daguuga jiran kana Adaba akka itti kennaniif hanga waraana kana diiganiitti kan nagaan biyyatti hineegamne ta’uu hubatuun Muummee Ministeera Dr. Abiyyi Ahemad dhiibba akka godhan kan deggaru ta’uunis himame.
Kanaaf uummanni Oromoo bakka maraa akka uummata Oromoo ajjeefamaa jiraanif sagalee taatan Qeerroon dhaammata!
Waan Kun hedduu garaa nama raasa. Bakka addaddaatti bobba’anis, Kaayyoo Oromoo
OMN:የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ (JUL,19,2018)